ARTICLES ( Siyin )
ARTICLES ( မြန်မာ )
TANGTHU ( Siyin )
TANGTHU ( မြန်မာ )
POKNA LA MP3
CIDAMNA( မြန်မာ )
THUTATUAM ( Siyin )
THUTATUAM ( မြန်မာ )
Buanman Khua Tuiphum Biakinn hon lai photo hi,Biakinn mai hi.
ENTRANCE TO SIALLUM FORT
Siallum kidona kulh,a mai pan tum na hi.
A Mai Pan Tum Na
Ngal kido na,amai ah khansuang hi.
THOMS OF SIALLUM FORT
Siallum ngal kodo laiathi te than le ngal ki kap na hi.
KULH A SUNG HI
Ngal do na mun hi in ngal do zo tu te hi sung ah om ci hi.
Mangkang ngal do na ei ma pu ngal do te om na mun ci hi.
NU MEI/NU PI KULH
Ngal do zo ngol numei patang te om na tuavawt Kulh ci hi.
LAMPI TUNG PUSUA NA
Kulhamai sang pan tum na lampi sia ah pusua na hi.
SIZANGNGAM APPLE LIANU TE
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဒလိုင်လားမား တွေ့ဆုံ
အေအက်ဖ်ပီ ပရတ်ဂ် ၊ စက်တင်ဘာ ၁၆ ။ ။ မြန်မာအတိုက် အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပရတ်ဂ်လူ့အခွင့်အရေးကွန်ဖရင့် ၏ကြားအချိန်များတွင် ဘုန်း တော်ကြီးဒလိုင်လားမားနှင့် သီး သန့်တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း အတည် ပြုပြီး နောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်အပေါ် တရုတ်က ဒေါသ ထွက်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိနေ ကြောင်း ကွန်ဖရင့်၏ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်က တနင်္လာနေ့တွင်ပြော ကြားခဲ့သည်။
တိဘက် ဘာသာရေးခေါင်း ဆောင် ဘုန်းတော်ကြီးဒလိုင်လား မားကို ပြည်ပမှ ဂုဏ်သရေရှိပုဂ္ဂိုလ် များကတွေ့ ဆုံခြင်းအား ပေကျင်း ကဆန့်ကျင်နေသည်မှာ ဆယ်စု နှစ်များစွာ ကြာမြင့်နေပြီဖြစ် သည်။ ဘုန်းတော်ကြီးဒလိုင်လား မားသည် တရုတ် အုပ်စိုးမှုကို ဆန့်ကျင်နေသော အုံကြွမှုအောင် မြင်မှုမရရှိပြီးနောက် ၁၉၅၉ခုနှစ် က အိန္ဒိယသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် ခဲ့သည်။ ''တနင်္ဂနွေနေ့က သူတို့ ဒလိုင်လားမားရဲ့ဟောပြောပွဲမှာ တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်''ဟု ကွန်ဖရင့်ကို စီစဉ်သည့် Forum 2000 ဖောင် ဒေးရှင်း၏ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဖိလစ် ဆီဘက်က AFP သို့ ပြောကြားခဲ့ သည်။
နိုဗယ်လ်ဆုရှင် နှစ်ဦးသည် သီးသန့်တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း လည်း ၎င်းကတိကျစွာပြောကြား ခဲ့သည်။ အင်အားကြီးမားသော မြန်မာမဟာမိတ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ တွင် အဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ပေ ကျင်းက ဒလိုင်လားမားသည် အ ကြမ်းဖက်မှု ကိုအား ပေး သော တ ရုတ်ဆန့်ကျင်သည့် ခွဲထွက်ရေး ဝါဒီတစ်ဦးဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ် ထားသည်။
သို့သော်လည်း အသက် ၇၈နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်ခေါင်းဆောင် ဒလိုင်လားမား က ၎င်းသည် တိဘက်လူမျိုးများ အတွက် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ကိုယ် ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေး ငြိမ်းချမ်း စွာကြိုးပမ်းနေကြောင်း အခိုင် အမာပြောကြား လျက်ရှိ သည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်က လန်ဒန် တွင်တွေ့ဆုံခဲ့ကြသော ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်နှင့် ဒလိုင်လားမား တို့သည် တနင်္ဂနွေနေ့ကစတင်ခဲ့ သော သုံးရက်ကြာဖိုရမ်၌လည်း မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ကြသည်။
၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးက ယခင်ချက် ကိုစလို ဗေးကီး ယား ၌ အာဏာရှင်ကွန်မြူနစ်အုပ်စိုး မှုကိုဖြုတ်ချခဲ့သည့် ၁၉၈၉ခုနှစ် ကတ္တီပါတော်လှန်ရေးသူရဲကောင်း တစ်ဦးဖြစ်သူ ကွယ်လွန်သူ ဗက်က လက်ဟာဗယ်ကို အရိုအသေပေး ခဲ့ကြသည်။
REF :: AFP
*National Boxing Championship ပြိုင်ပွဲတွင် Mai Nelly ပထမဆုရ*
၂၀၁၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၄-၁၇) ရက်နေ့များအတွင်းတွင် နေပြည်တော်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော National Boxing Championship ပြိုင်ပွဲတွင် ချင်းအမျိုးသမီး Mai Nelly Bawi Nei Sin မှ ပထမဆုတံဆိပ် အား ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
မိုင်နယ်လီသည် ယနေ့ စက်တင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော (၅၄) ကီလိုတန်း၏ ဗိုလ်လုပွဲတွင် ပြိုင်ဘက်- မအေးမြတ်လွင်အား အနိုင်ရရှိခဲ့ကာ ပထမတံခွန်စိုက်ဆုနှင့် ဆုကြေးငွေ ကျပ် (၂၀၀၀၀၀) အား ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။
ပထမဆုဆွတ်ခူးနိုင်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍- Mai Nelly မှ- “ ပထမဆုရတဲ့အတွက် ၀မ်းသာ ပါ တယ်။ လာမယ့် Seagames ပြိုင်ပွဲမှာ အောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက် ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ ကူညီပေးကြဖို့ကို မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်” ဟု Chin World သို့ပြောသည်။
Mai Nelly သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဂျူလိုင်လ (၁၈) ရက်မှ သြဂုတ်လ (၁၄) ရက်နေ့များအတွင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ လက်ဝှေ့အဖွဲ့ချုပ်မှ စေလွှတ်သော တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသို့ သွားရောက်လေ့ကျင့်သည့် ပဏမမြန်မာ့ လက်ရွေးစင်လက်ဝှေ့အဖွဲ့တွင် တစ်ဦးအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးမြို့နယ် Sadaw ရွာမှ Pu Than Ceu နှင့် Pi Hrang Nei Kil တို့၏ သမီးငယ် Mai Nelly Bawi Nei Sin သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် လက်ဝှေ့အားကစားအား စတင်ကစားခဲ့ပြီး၊ တူရကီနိုင်ငံတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ကမ္ဘာ့လူငယ်လက်ဝှေ့ ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံအား ကိုယ်စားပြုခဲ့ပြီး ပထမအဆင့်တွင် ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံသူအား ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။
ပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုတံဆိပ်များအလီလီဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈) ရက်မှ မတ်လ (၇) ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့သော ဆီးဂိမ်းစ်အကြို ပြည်ထောင်စု အားကစားပွဲတော်တွင်လည်း စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးအား ကိုယ်စားပြုကာ ရွှေတံဆိပ် ဆွတ်ခူး ပေးနိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။(Chin World Media)
Husya On Kho Kam ih inn kang tawh kisai hu na
3:10 AM Unknown No comments
Kong itt Sizang suapui theampo,
Lungdam na lai hi sia tu in kong suaksak zo pheng hi.USA Sizang sung bek tha tong ka ci hi ve,
pawl khat na USA Sizang groups la ngawl zong om hi tan nah, Sizang net sung zong hong tha hi mai khi hi.
Tu nung Lim Khai Bungh khuaaHusya On Kho Kam ih inn kang tawh kisai hu na tatuam hong pia te tung ah
lung dam hong koh khi hi. Pawlpi tatuam pan zong ki thak sa zong om. Tutung kei ma kung ah hong ki pia teng
anuai aa bang teng hi.Adiadiak in Calvary Burmese Church pan hu na hong vai hawm sak ahi Dr Lian Kok tung zong
Lung dam kan lai khu hi.A nuai teng sia U Ngo Cin Thawng thu thiam na tawh sum hong khon sak na
min list hong piak babang kong suaksak hi.
1. Calvary Burmese Church pan -------$ 1000
2.Mang sen---------------------------------$ 20
3.Mang Hen Khai--------------------------$10
4.Ngo Cin Thawng-------------------------$ 50
5.Sya Cin No--------------------------------$20
6.Tual Mung---------------------------------$ 20
7.Tuak Kim----------------------------------$ 50
8.Sungh Za Dal------------------------------$ 20
9.Ngin Khan Khai --------------------------$ 20
10.Zam Cin Dal------------------------------$ 10
11.Ngin Tual Mang -------------------------$20
12.Dongh Lam Cin -------------------------$ 15
13.Cin Khan Mang --------------------------$ 20
15. Canaan Home Cell pan-----------------$ 120
Hi atung aa $ 425.00 teng leh ko ma LimKhai mi sung pan ka kai khop na pan ka nga uh $ 675.00 vek pi ngawm $ 2100 lian ki ngahi.
Hi sum teng sia tu ni mama in WU tawh ki thak zo hi. Amie pa ( U Khai Pui ) thu thiam na ma tawh athak man $ 35.70 sia ama nah hong sik
lai hi tan nah sum thena Ks 968.11 rate tawh acing in kithak thei suak hi.
Hi bang aa ih mi pui khat ngim anga ciang ih ki hu ngeingai na in ih tha hat na khat suak kik hi.
Hu na hong pia akua mapo tung ah lung dam mama hi ci in hi lai tawh lung dam na hong thak siat hi.
TOPA'n thupha hong buak tawntung ta hen.Son khial leh at tu aki lawm ka at thak ngawl om le mawhmai na bawm ah na koi sak oo.
Lim Khai mi teng tang,
Cin Thian pau
နားနှင့် ပတ်သက်ပြီး မပြုလုပ် သင့်သော အရာများ
12:07 AM Unknown No comments
ဒါ့ကြောင့် နားတွေကို မမှန်ကန်တဲ့ နည်းတွေနဲ့ သန့်စင် ဆေးကြောမှု ပြုလုပ်တဲ့ အခါ နားမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရခြင်းနဲ့ နားတွင်း ကူးစက်ပိုး ဝင်ခြင်းဆိုတဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်စေ နိုင်ပါတယ်။
နားဖားချေး တွေဟာ နားရဲ့သူ့ဘာသာ သန့်စင်စေတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ် နိုင်အောင် ဆောင်ရွက် ပေးပါတယ်။ နားဖာချေး တွေဟာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပိတ်ဆို့ မနေရင် ကလော်ပြီး မဖယ်ရှား သင့်ပါဘူး။ အပြင် နားစည် အရေပြားရှိ ဂလင်းကနေ ထုတ်ပေးလေ့ ရှိတဲ့ နာဖာချေးတွေဟာ အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်း ဆောင်တာ တွေကို လုပ်ဆောင် နေပါတယ်။
နားစည်ရဲ့ အရေပြားကို ကာကွယ် ဖုံးအုပ်ပေးခြင်း၊ ရေကို တွန်းထုတ်ခြင်းနဲ့ နားတွင်း ပိုးဝင်တာနဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ မဖြစ်အောင် ကာကွယ် ပေးခြင်းစတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ အပြင် နားအတွင်း အရေပြား ခြောက်သွေ့ ယားယံခြင်း မဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်း ပေးပါတယ်။ ဒါ့ပြင် နားဖာ ချေးဟာ အပြင်ကနေ ဝင်လာတဲ့ ဖုန်နဲ့ ပိုးမွှားတွေကို နားစည်ထဲ မရောက်အောင် သယ်ယူ ထားပေး ပါတယ်။ အများအားဖြင့် နားဖာချေးဟာ သူ့အလိုလို ထွက်သွားလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့ လူတွေမှာတော့ အလိုလို ထွက်မသွားတဲ့ အတွက် နားဖာချေးကို ကလော်ပြီး ဖယ်ထုတ် ရတတ်ပါတယ်။
နားစည်ထဲ ဘာမှ မထည့်ပါနဲ့
နားအတွင်း ထဲကို ဝါဂွမ်းစ၊ လက်ချောင်း၊ ကလစ်လို ချွန်ထက်တဲ့ အရာတွေ မထည့်ပါနဲ့။ နားအတွင်းထဲ ပြင်ပ ပစ္စည်း ထည့်တာဟာ နားစည်ရဲ့ နူးညံ့တဲ့ အရေပြားကို ထိခိုက် ပျက်စီး စေသလို အခန့်မသင့်ရင် နားစည်ကို ပေါက်ပြဲ စေပါတယ်။ လူအများစုဟာ နားဖာချေး ထွက်သွားအောင် နားထဲကို ပြင်ပ ပစ္စည်း ထည့်ပြီး ကလော်ထုတ် တတ်ကြပါတယ်။
နားဖာချေး သိပ်မရှိဘဲ ပြင်ပ ပစ္စည်းဟာ နားစည် အထိ ရောက်သွားရင် နားကို မသက်မသာ ဖြစ်စေကာ ယာယီ နားမကြားတော့ တာမျိုး ဖြစ်သွား တတ်ပါတယ်။ နားစည် အရေပြား ခြစ်မိခြင်းနဲ့ နှာချေးဟာ နားစည် အတွင်းထဲ အထိ ရောက်ရှိသွားခြင်း တွေကြောင့် နားတွင်း ကူးစက်ပိုး ဝင်တဲ့ အန္တရာယ်လဲ များပါတယ်။
နားရဲ့ အပြင်ဘက်ပိုင်း ညစ်ပတ်နေရင် ဆပ်ပြာနဲ့ ရေစိုစွတ်နေတဲ့ နူးညံ့တဲ့ အဝတ်စသုံးပြီး ဆေးကြောပေးပါ။ ဒါပေမဲ့ နားအတွင်း ထဲကိုတော့ အဝတ်စ၊ လက်ချောင်းနဲ့ တခြားဘာမှ ထည့်ပြီး မဆေးကြောပါနဲ့။ ကလေးရဲ့ နားကို ဆေးကြော သန့်စင်ပေးချင်ရင်လည်း ဝါဂွမ်းစကို ဆပ်ပြာမပါတဲ့ ရေထဲထည့်ပြီး ဆေးကြော ပေးလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နားကို ခြောက်သွေ့အောင် ပြန်ပြုလုပ်ဖို့ အရေးကြီး ပါတယ်။ ရေကူးတဲ့ သူတွေမှာ နားခြောက်သွေ့အောင် အထူး ဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ တကယ်လို့ နားတွင်း ပိုးဝင်ပြီး နာကျင် နေရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြပါ။
လူကြီးတွေကော ကလေးတွေမှာပါ နားထဲ ပြင်ပ ပစ္စည်း ဝင်နိုင်ပါတယ်။ လူကြီးတွေမှာတော့ နားကပ် ကျွတ်ပြီး မတော်တဆ နားထဲ ဝင်သွားတာ ဖြစ်တတ်ပြီး ကလေးတွေ ကတော့ စနောက်ချင်စိတ်၊ စပ်စုလိုစိတ်နဲ့ အခြားကလေးရဲ့ နားထဲ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်နားထဲ ပြင်ပ ပစ္စည်း ထည့်တတ် ကြပါတယ်။
ပဲစေ့လို၊ ခဲဖျက်လို ပစ္စည်းတွေ ဆိုရင် သူ့အလိုလို ပြန်ထွက် သွားဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ အင်းဆက် ပိုးမွှားတွေလည်း နားထဲရောက်ပြီး ပိတ်မိ နေတာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်ဘာသာ ပြင်ပ ပစ္စည်းကို ဖယ်ရှားဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ ဆရာဝန်ထံ ချက်ချင်းသွားပါ။ ဆရာဝန်က နားထဲက ပြင်ပပစ္စည်းကို အထူးကိရိယာနဲ့ ဖယ်ရှားပေးမယ့် အပြင် နားထဲမှာ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရှိ၊ မရှိ ဆန်းစစ်ကြည့်ရှုတာ လိုအပ်သလို ကုသပေးပါလိမ့်မယ်။
နားထဲ နားဖာချေး အလွန်အမင်း ပိတ်ဆို့နေပြီး ဖယ်ရှားဖို့လိုတဲ့ အခြေအနေတွေ ရှိပါတယ်။ ဖယ်ရှားဖို့ လိုတဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေ ကတော့ နားအကြားအာရုံ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ နားကိုက်ခြင်း၊ နားအူခြင်း၊ နားထဲပြည့်နေသလို ခံစားရခြင်း စတာတွေပါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ မိမိဘာသာ နားထဲက နားဖာချေး ထုတ်တာမျိုး မလုပ်ဘဲ နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း အထူးကုဆရာဝန်နဲ့ ပြသလိုက်ပါ။
ရေချိုးချိန်မှာ အသားအရေကို အစိုဓာတ် ထိန်းသိမ်းနည်း
အကြောင်း ကတော့ အသက်ကြီး လာလေလေ အသား အရေက ခြောက်သွေ့ လာလေလေ ဖြစ်တတ်
တာကြောင့် အရေပြား စိုပြေနေအောင် ရေချိုးချိန်မှာ လိုက်နာ သင့်တဲ့ နည်းလမ်း တွေကို ဖော်ပြ လိုက်
သင့်အနေနဲ့ ရေမချိုးခင်မှာ လက်မောင်း ဒါမှမဟုတ် ခြေထောက် ပေါ်က အရေပြား နေရာငယ်ကို လက်သည်းနဲ့ ခြစ်ကြည့် လိုက်ပါ။ အဖြူရောင် အမှတ်ရာကြီး ကျန်နေခဲ့ရင် အရေပြားက ခြောက်သွေ့
နေတာကြောင့် အစိုဓာတ် ထိန်းဖို့ အထူးလိုအပ် နေပါတယ်။
ရေပူနဲ့ အချိန်ကြာကြာ ချိုးတာက အရေပြား ပေါ်က အစိုဓာတ်ကို ကင်းဝေးစေပြီး အကာအကွယ် အဆီတွေကို ဆေးချ လိုက်သလို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသားအရေ ခြောက်သွေ့ နေသူတွေ အနေနဲ့ အေးမြတဲ့ရေနဲ့ ချိုးသင့်ပြီး ရေချိုးချိန်ကို ခဏပဲ ထားသင့် ပါတယ်။
ဆောင်းရာသီလို အေးမြလွန်းတဲ့ နေ့ရက်တွေမှာ တစ်ရက်ခြား တစ်ကြိမ်ပဲ ရေချိုး သင့်ပါတယ်။
အဆီဓာတ် ပါတဲ့ ဆပ်ပြာတွေဟာ ရေချိုးပြီးချိန်မှာ အရေပြားပေါ်ကို အကျိုးရှိတဲ့ အဆီလွှာ တင်ကျန်
နေတတ် ပါတယ်။ အနံ့မွှေးလွန်းတဲ့ ဆပ်ပြာတွေကတော့ အသားအရေကို ခြောက်သွေ့ စေပါတယ်။
ရေချိုးချိန်မှာ အရေပြားပေါ်က ဆဲလ်သေတွေ ကွာကျသွားအောင် သပွတ်အူနဲ့ စက်ဝိုင်းပုံ အတိုင်း ညင်ညင်သာသာ လှည့်ပြီး ကြေးကျွတ်အောင် လုပ်ပေးပါ။ သုံးထားတဲ့ သပွတ်အူကို ခြောက်သွေ့
တဲ့ နေရာမှာ အမြဲ သိမ်းထားပါ။ စိုစွတ်နေတဲ့ နေရာမှာ ထားပါက ဘက်တီး ရီးယား ပေါက်ဖွား နိုင်ခြေ ရှိပါတယ်။
BY :GOOD HEALTH
Pi Tual Dim@ Anty Khai (72) Leitung Hong Nusia Hi
Khuasak Khua,Yangon ah teang Pi Tual Dim@Anty Khai (72) Gen Tuang Za Khai zi sia 23.July.2013 zingsang 7:30 ni in aom na inn panaitangai te tawh hong nusia in Topa kung ah hong zuan san hi.
Mangkang Kumpi te ih , Khamtung ngam hong do lai in , Sizang Ngaalhangalampui pi sia Khuasak Ukpi pa, Pu Khup Pau hi aa, hiamzak kibang ngawlahi ciang, ngalki lel aa, Khamtung ngam sia Mangkang Kumpi te khut sung theng hi.
Mangkang te uk na uuk ngawlahi ciang, Kawlngam taangthu sung ahamasa bel, Kumpi do na kinei hi. Fort-white khuaaom Myo Oke Tun Win sia, Suang Bum ah kithat hi.
Tasia pan kipan Ngalhang te, ngamsungabu cipapawlkhat Kumpi sung ah tumahi hang, Pu Khup Pau leatate, Pu Khai Kham le Pu Mang Pum sia tum nuam ngawl in ngamsung ah bu top hi.
Mealheak teakimat mat ciang in Tua pa tate thum sia , Kumpi sung ah hong ki aap hi. Pu Khai Kam sia Adaman tuikul ah , khantawntung thong taak tu in kipuak hi. Pu Mang Pum sia thong sung ah , Kawllai sin aa Kawlkam pauthei aat thei ahi ciang, thong panapusua ciang, Khamtung misung ahamasabel Gazetted Officer suak hi.
Pu Khai Kam zongh, Pu Mang Pum hanciam na taw khantawntung thong tak na pan hong pusuak thei hi.
Pu Khai Kam ta pa Subedar Pu Ngin Zam , O.B.,
Pu Ngin Zam le Pi Khai Cingh sung pan piang ta te,
1. Bo Pum Za Kam (Thurah) – Karen Ngalsung thi
2. Pi Lian Za Vung ( Pu Lua Cin Pau)
3. Sayagyi Pu Vum Khaw Cin + Pi Ciang Khai
4. (Pi Tual Dim ) ( Major General Thuang Za Khai )
1. Kam Do Dal
2. Cingh Thian Uap
3. Khan Lian Khup,
Pi Tualdim sia Sunday ni zongh Choir khawng sa vase, Zeini zong Mithi ngak ma in paivaset sia tubang hong nusiat bing bung sia kikhua ngai tek hi.
Ama sia khanzo mama nupi khat hi aa, maimua nuam aa, akua ma po taw kilem thei nuupi khat hi. Ka no laiama ih la sak thei khat phawk kikik ingh.
“ NO NEVER ALONE “
No Never Alone Voices Of Inspiration Choir
Tg Tual Nang Leitung Hong Nu Sia Hi
Tg.Tual Nang ခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်သွားပါသည်။
Taang Tual Nang Dr.Sing Za Khai Naupa hong nusia
Buanman Khua Capt.Suang Za Pum le Pi Thawng khaw Cing te ii ta5sung panalian bel pan ani na ahi Taang Tual Nang in yangon Seikkantha St. 124 innpan in 21-7-2013 zing sang nai 5:00 pawl inn lei tung hong nusia hi.
Asuapui teng sia
1.Dr.Rev.sing za Khai (USA)
2.Taang Tual Nang ******
3.Police Capt. Khai Khan Pum
4.Nu Vum Za Neam (Oo Neam Tawng, Ausi )
5.Rev. David Ngo Cin Khai (USA)
hong nusia innkuan pui te tawh khua ngai khawm khi hi. Topa TTT na he nep na hong pia sak ta hen.
Sizang Ngamsung Pathian Na Seam masa Te
ရောဂါအလိုက် အကျိုးပြုမည့် ဗီတာမင်များ
Obama in University of Yangon ahaThugen (Zokam)
Vantung Thu Radio
Hymn Siyin,Hester Kiim
Singzang Burmese Mission Church
Pu Thuklai Suanlepaal
Thing U Nau
A Kisim Thulu Te
Leitung Ngam Tatuam Pan
Thutatuam ( Siyin ) (120)
Tangthu ( Siyin ) (77)
Thutatuam ( မြန်မာ ) (58)
Cidamna ( မြန်မာ ) (54)
Articles ( Siyin ) (30)
Articles ( မြန်မာ ) (2)
Tangthu ( မြန်မာ ) (2)
Pokna La MP3 (1)
Copyright © 2011 Global Siyin News | Powered by Blogger